Ukuphupha ngesiphelo sehlabathi Discover Discover Discover online ▷ ➡️
Zombini ukudalwa kwehlabathi kunye nokuphela kwehlabathi zizinto ezixakeke bubuntu ixesha elide. Kukho iingcamango ezininzi ezahlukeneyo kwaye iziprofeto ezininzi ziye zabhengeza imihla ethile yokuphela kwehlabathi: ifuthe elibi leemeteorite, uhlaselo lwabaphambukeli okanye uqhushumbo olukhulu lweatom kufuneka luqinisekise ukuba ubomi obuqhelekileyo kwiplanethi eblue abusenakwenzeka.
Nangona kunjalo, ukuza kuthi ga ngoku, akukho xesha libekiweyo lokuphela kwehlabathi eliye lafezekiswa. Nangona kunjalo, kusekho abaprofeti bomhla wentshabalalo kunye namaqela enkolo abika ukuba i-apocalypse isondele kwaye usuku lomgwebo selukufuphi.
Kodwa ngaphandle kwehlabathi elivukayo, el mundo yamaphupha nayo isongelwa ngokuphela kwehlabathi. Ukuba umfanekiso wephupha "lokuphela kwehlabathi" uvela, kuhlala kuyinto enkulu kakhulu, edanisayo neyoyikisayo ephupheni. Nangona kunjalo, lo mfanekiso wephupha akufuneki uthathwe njengesibhengezo sesiphelo sokwenene sehlabathi. Funda kwinqaku elilandelayo ukuba inantoni na intsingiselo yephupha!
1 Uphawu lwephupha «isiphelo sehlabathi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isiphelo sehlabathi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukuphela kwehlabathi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isiphelo sehlabathi» - ukutolikwa ngokubanzi
Iziganeko ezothusayo njengokuphela kwehlabathi kwihlabathi lamaphupha zihlala zibonisa imeko yeemvakalelo zephupha. Ukuba lo mfanekiso wephupha uvela ngelixa ulele, kuhlala kunjalo, kodwa hayi rhoqo! - ukothuka ngokweemvakalelo okunobangela. Oku amava abuhlungu Kwilizwe elivukayo, babonwa ngamaphupha "njengesiphelo sehlabathi", umzekelo ukwahlukana noluntu okanye ukuphoxeka okukhulu okushukumise iziseko kunokuba.
Uninzi lwamaphupha luza ngaphambi kokubaluleka Isiqalo esitsha, kuba ilizwe lakhe langaphambili, ngokuthetha, latshabalala ngala mava. Ukwazi ukuba indlela yobomi bangaphambili yayisisigqibo esingalunganga inokuba sisizathu sokuba lo mfanekiso wephupha uvele.
Kubalulekile ukuba wenze amaphupha acinge ngobomi bakho kwaye ukuba kukho imfuneko yokuyila kwakhona. Kule meko, ukuphela kwehlabathi kwihlabathi lamaphupha kubandakanya ithuba lesiqalo esitsha.
Ngamanye amaxesha uphando lwamaphupha luthathela ingqalelo ukuphela kwehlabathi kubalulekile. isilumkiso. Kule meko, isiphelo sehlabathi sibhengeza ukungqubana okungachasana nephupha. Olu toliko luchanekile ngokukodwa ngabaphuphi abathandabuzekayo, Oko kukuthi, ngabantu amaphupha abo ahlala ezaliseka kungekudala emva kokuvuka kwehlabathi kwaye lizaliseke.
Kodwa ke iingxaki zabucala ekuzihlanganiseni zibhengezwa ngulo mfanekiso uphupha, umzekelo, xa abantu benzakaliswa ephupheni, lowo liphupha limthanda kakhulu. Ngokwesiqhelo, umfanekiso wephupha ubhengeza ukwahlukana nombutho, ukuba awuphikiswa ngexesha.
Uphawu lwephupha «isiphelo sehlabathi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo yamaphupha kutolika ukuphela kwehlabathi kwilizwe lamaphupha ngokubanzi njenge Yintlungu ngaphambi kobomi kwihlabathi elivukayo. Ukuba lo mfanekiso wephupha uvela ngexesha lokulala, ke iphupha lineengxaki ezinkulu kunye noloyiko kubomi bemihla ngemihla. Uziva udiniwe, ungazithembanga, kwaye ungenakuzinceda. Isiphumo sihlala "sisisidima," esichaphazela namaphupha.
Ukuba lo mfanekiso wamaphupha uvela rhoqo kwaye ujike ube luhlobo lwephupha elibi, iphupha elo kufuneka lifune uncedo lweengcali kunye neengcebiso zokulwa noonobangela kwaye uphinde ufumanise le meko imbi.
Uphawu lwephupha «ukuphela kwehlabathi» - ukutolika kokomoya
Ukuphela kwehlabathi ekuchazeni amaphupha okomoya, i Ukuhlangulwa ukusuka Emhlabeni Itolikiwe